VPS - Shweman Online Media - Page 38 of 281 - News
ဟင်္သာတမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့မှ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၅၀) ကျော်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများလှူဒါန်း
ဟင်္သာတမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့မှ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၅၀) ကျော်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများလှူဒါန်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့တွင် COVID-19 ကာကွယ်ကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့မှ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၅၀) ကျော်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများလှူ ဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ လှူဒါန်းမှုကို ဟင်္သာတမြို့၊ ဖိုးစတောရပ်ကွက် စံမတူ၂ လမ်း၊ ၃လမ်း၊
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လမ်းပေါ်မစွန့်ပစ်ကြပါနဲ့… မကျွေးနိုင်ရင် လာပို့လှည့်ပါ ..ဦးဇင်း လာခေါ်ရမယ် ဆိုလည်း လာခေါ် ပါ့မည့်ဆရာတော် ယနေ့ေ ခတ် မှာ သက်ကြီးရွယ် အိုတွေ ကို လမ်းဘေး မှာ စွန့်ပစ်သူတွေ ရှိလာ ပါတယ်…အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မကျွေးမွေးမပြုစုနိုင် လို့ ခုလိုစွန့်ပစ်မှုတွေ ဖြစ်လာရတယ် လို့ ဆိုရမှာပါ….. သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ
အဖေ့ကို လုပ်ကျွေးပြုစုပြီး တစ်သက်လုံးကျေးဇူး ဆပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရဲမေလေး
အဖေ့ကို လုပ်ကျွေးပြုစုပြီး တစ်သက်လုံးကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရဲမေလေး . . . မိဘအရိပ်အောက်က ထွက်ပြီး ရဲထဲ ဝင်မယ် လုပ်တော့ ဘယ်သူမှ မငိုပေမယ့်..အဖေကတော့. အိပ်ယာလေးထဲ.ကြိတ်ကာငိုရှာတယ်.. သားသမီး၇ယောက်ကို ဝမ်းဝအောင်ကျွေး ခါးလှအောင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ပြန်ခရီးတိုင်းကို. ပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီး မငြီးခဲ့သလို ဆင်းရဲလိုက်တာဟာဆိုပြီးလည်း အဖေ့မျက်ရည်.မြေမခခဲ့ပါဘူး… အဖေ့လက်ကို ဆွဲပြီး သွားလေရာ..မခွာတဲ့ ဖေချစ်သမီလေး.. အငယ်ဆုံးလေးမို့
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သောအိမ်ထောင်ရေး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အတိုက်အခိုက်ကင်းလိုလျှင်
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သောအိမ်ထောင်ရေး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အတိုက်အခိုက်ကင်းလိုလျှင် ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး ချီးမြှင့်သော အစွမ်းထက်သော ကျောက်ခဲကျင့်စဉ် ဤ အစွမ်းထက်သော ကျောက်ခဲကျင့်စဉ် သည် သီးသန့် ချီးမြှင့်ခဲ့သော ကျင့်စဉ်ထူး ဖြစ်သည်။လူသိနည်း ၍ ရှားပါးသော ကျင့်စဉ် ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် ဤကျင့်စဉ်မှာ လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှု့ရှိသည်။ ထူးခြားပြီး လွယ်ကူသည့် ကျင့်စဉ် ဖြစ်
သားဖြစ်သူ မျက်လုံး ထဲကို သဲ ထည့်ပီး အစွမ်းတန်းခိုး နဲ့ လက်တွေ့ပြန် ထုတ်ပြတဲ့ တောင်ကြီးမြို က အသားအဖ ဗီဒီယိုဖိုင်
ဒီဗွီယိုဖိုင်ထဲက အမျိုးသားဟာ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်ကြီးဆိုတာလည်း နှစ်သက်တမ်းအားဖြင့် ကြာမြင့်စွာရပ်တည်လာတဲ့ ဂိုဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဂိုဏ်ဝင်များလည်း များစွာရှိပါတယ်။ ဂိုဏ်းကြီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ သတ္တဝါတွေကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတို့မှ ကာကွယ်ဆီးတားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုဏ်ကြီးရဲ့ အဓိကစည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာ သူတစ်ပါးသားမယားကို မပြစ်မှားရ၊ အရက်သေစာမသောက်စားရ၊ အမဲသား(နွားသား) မစားရတို့ဖြစ်တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းသိရပါတယ်။ မကြာသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှ ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည်ဆရာတော်မှ ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပီး လေ့လာမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သေခါနီး လူကို အားပေးစကားပြောနည်း(၄)နည်း
လူတွေဟာ အနေတတ်ဖို့ လိုသလို အသေတတ်ဖို့ လိုသေးတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်”မြတ်စွာဘုရား”က ဒီ”သုတ္တန်”မှာ”အနေတတ်ဖို့ လိုသလို အသေတတ်ဖို့ လိုသေးတယ်တဲ့။ အေး•••••••နေမကောင်း ထိုင်မသာဖြစ်ပြီးတော့ရောဂါ ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပညာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ကိုပညာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကအားပေးစကား ပြောသင့်တယ်။အကျိုးရှိလို့ ပြောတာအားပေးစကား ပြောရမှာ။ မြန်မာပြည်မှာ တချို့သေငယ်ဇောနဲ့ မျောနေတဲ့ လူ တစ်ယောက်ကို အားပေးစကားမပြောပဲနဲ့။”ဘဏ်စာအုပ်ဘယ်နားထားခဲ့လဲလို့ မေးတယ်။လက်ကောက်တို့ စိန်
အမျိုးသမီးတိုင်း သူမလိုအဖြစ်ဆိုးမှကင်းဝင်းဖို့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း
အမျိုးသမီးတိုင်း သူမလိုအဖြစ်ဆိုးမှကင်းဝင်းဖို့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း အဆိုတော်နှင့်သရုပ်ဆောင် ရေဗက္ကာဝင်းက သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းကို ခုလိုပဲဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ ရေဗက္ကာဝင်းဟာ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာမတူသူတစ်ဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို နားလည်မှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေဗက္ကာဝင်းနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုကောင်းကျော်ဆွေတို့ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၆ နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဖောင်ကြီး ငမိုးရိပ်ဆည်ထဲကနေ ပေါ်လာတဲ့ နှစ်ပေါင်း တရာကျော်က ဝါးချောင်းရွာပျက်ကြီး
ဖောင်ကြီး ငမိုးရိပ်ဆည်ထဲကနေ ပေါ်လာတဲ့ နှစ်ပေါင်း တရာကျော်က ဝါးချောင်းရွာပျက်ကြီး . . . ပြီးခဲ့ သည့် ၁၅-၆-၂၀၂၀ အတွင်း လှည်းကူးဒေသ၏ မြောက်စူးစူး ဖောင်ကြီးငမိုးရိပ်ဆည်ထဲရှိ ဝါးချော င်းရွာပျက်ကြီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာတွင် မြေပြင်အခြေအ နေများကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သိရှိခဲ့ရပြီး ထိုက်သင့်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ရရှိခဲ့၏။ ပြီးပြည့်စုံ သည့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမူ
အောက်တန်းစား လို့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုသတ်မှတ်တာလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ
ပရိသတ်ကြီးရေပန်ကိတ်ဒါဒါကတော့သူမရဲ့အတွေးအခေါ်လေးတွေနဲ့အလှအပရေးရာဆိုင်ရာတွေ ဝေမျှမှုကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တော်တော်များ သဘောကျဝန်းရံခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပန်ကိတ်ကို​ေတာ ့ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေရှိသလို ​တမင်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ သူမကတော့အမြဲမိန်းကလေးတွေအတွက်ခွန်အား​ရှိစေမယ့်စာတွေကိုရေးသားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ” လူတွေက ဘာလို့ လွယ်လွယ်နဲ့အောက်တန်းကျလဲ မေးရင်အောက်တန်းကျဖို့ဆိုတာ သင်ယူစရာမလို လို့တဲ့။ ဒါဆို ကိုယ်က အဲ့လို မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ထိန်းရမလဲဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့ ထိန်းရမယ်တဲ့။ ဒါ ဆို အသိစိတ်မရှိတဲ့ သူတွေကို ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲ။”ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးမေးခဲ့တာပဲ
Jack Ma ပြော တဲ့လူ ၆ မျိုး တစ်သက် လုံး ပေါင်းသင်းသင့်သူ ၆ဦး
Jack Ma ပြော တဲ့ဲ လူ ၆ မျိုး တစ်သက် လုံး ပေါင်းသင်းသင့်သူ ၆ဦး ဒီလူ ၆ မျိုးနဲ့ ဆုံရင် တစ်သက်လုံး ပေါင်း သင်း ပါ ။ သင့်ကို ငွေချေးပေးသူ ငွေတစ်ပြား တစ်ကျပ်တိုင်းဟာ သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ ရင်းခဲ့ တာ ပါ
Newer 1 … 36 37 38 39 40 … 281 Older